Xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii loo qaaday Dalka Qatar oo soo hagaageyso | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii loo qaaday Dalka Qatar oo soo hagaageyso
Xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii loo qaaday Dalka Qatar oo soo hagaageyso
Waxaa soo hagaagaya xaaladda caafimaad ee Dadkii dhowaan ku dhaawacmay qaraxii ay argagixisadu ka geysteen xarunta Gobolka Banaadir, sida uu warbaahinta Qaranka u sheegay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Qatar, C/risaaq Faarax Cali (Taano).
Dhaawacyadii la geeyay Magaalada Doxa ee Caasimadda Dalka Qatar oo isugu jira mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Shacab ka kooban 12 Qof ayaa aad usoo ladnaanaya sida uu Safiirku sheegay.
Dhaawacyada la geeyay Dalka Qatar oo isugu jira Dad kusoo waxyeelloobay qaraxyadii ka kala dhacay agagaarka KM 4 Muqdisho, magaalooyinka Kismaayo iyo Boosaaso ayuu sheegay Safiirku in ay si isku mid ah u qaabbishay xukuumadda Doxa, wuxuuna ugu mahad celiyay sida ay ugu hagar baxday Daweynta Dadkaasi.
“Dowladda Qatar waxay sameysay dedaal kii ugu weynaa, waanan ugu mahad celineynaa, laga billaabo jawaabtii deg-degga ahayd ee ay bixisay, in 24 Saac wax ka yar ay noo soo dirtay Diyaarad iyo Dhaqaatiir 19 ka kooban, dhaawacyadii oo dhanna ay qaadday, iyo dhaawacyo ay kusoo dartay Dhaqaatiirtu dhaawacyo hore oo isugu jira kuwo laga keenay Boosaaso, Kismaayo iyo KM4, marka waa ugu mahad celineynaa in ay noqdeen Dowladdii ugu horreeysay ee Jawaab deg-deg ah bixisay”ayuu yiri, Safiirku.
Safaaradda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Qatar ayuu sheegay in ay sameeyeen dedaallo dheeri ah, wuxuuna intaa raaciyay in ay sameeyeen Dad heegan ah oo mar walba ka war haya xaaladda Dhaawacyada.
Xaaladda Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, C/raxmaan Cumar Cusmaan ayuu sheegay in ay aad usoo hagaageyso , lana filayo inuu dhowaan ka bogsoodo dhaawacii soo gaaray, isagoo ka muujiyay yididiilo wanaagsan iyo is beddel caafimaad.
Previous articleWasiir Beyle oo ka qeyb galay Shirka Qurba-joogta Soomaaliyeed ee magaalada Washinton
Next articleQatar oo mashaariic ka hirgelineysa maamul goboleedka Hirshabeelle